~~~ နွေမုန်တိုင်း ~~~: April 2008
အဲဒီနေ့က ကျွန်တော့်ရဲ့ လွပ်လပ်ခြင်းတွေကို သူမဆီ ကြည်ဖြူစွာနဲ့ အပ်နှင်းလိုက်ရတယ်။ လေဟုန်စီးပြီးလွပ်လပ်စွာ ပျံသန်းပျော်မြူးတတ်တဲ့ ငှက်တစ်ကောင်ဟာ လှောင်အိမ်ထဲကို သူကိုယ်တိုင်တိုးဝင်ခဲ့တယ်။ မှုန်ပျပျ အလင်းရောင်အောက်မှာ စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ ခရီးတစ်ခု ကို တိမ်တိုက်နဲ့အတူ ရွက်လွင့်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ရင်ခုန်သံတောင်ကိုယ်ပြန်ကြားလို့...။သူမအပြုံး သူမ မျက်လုံးတွေရဲ့ စူးရှမှု ကြောင့် လတစ်ခြမ်းတောင် ညချမ်းမှာ တိမ်တိုက်ကြား တိုးဝင် ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။
ရွန်းလဲ့တဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံက အနာဂတ်ရဲ့ လမ်းပြကြယ်တစ်ပွင့်လား?
သူဖန်ဆင်းတဲ့ အပြုံးတစ်ပွင့်ကတော့ ကျွန်တော့်အိပ်မက်တွေကို နွေခေါင်ခေါင်မှာ
မှော်ပဉ္စလက်နဲ့ ဖမ်စားသလို သူမရှေ့မှောက် မှာ ဒူးထောက်ကျဆုံးသွားတယ်။
ကျွန်တော့် စိတ်ကူး၊အိပ်မက်၊အနာဂတ်တွေ ကိုအဲဒီနေ့မှာပဲ သူမ အကုန်သိမ်းပိုက်သွားတယ်။ ( သူမ သိမ်းပိုက်သွားတယ်ဆိုတာထက် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပေးအပ်လိုက်ရတယ်ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်) ကျွန်တော် ပိုင်ဆိုင်သမျှ အရာအားလုံး သူမရဲ့ အပြုံးတစ်ပွင့်အောက် မှာတင် နူးညံ့စွာ ကျရှုံး ခဲ့ကြတယ်။ ဖမ်းဆုတ်မရတဲ့ ကျွန်တော့် မျှော်လင့်ချက်တစ်ချို့တောင် သူမ ဆုတ်ကိုင်နိုင်စွမ်း ရှိတယ်။ ကျွန်တော် တည်ဆောက်ထားတဲ့နန်းတော်မှာ သူမ ကတော့ အရှင်သခင်ပါပဲ။ ကျွန်တော် တယုတယ နဲ့ ပျိုးခဲ့ရတဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးက ဒီနေ့မှာတော့ ရှိသမျှပန်းတွေ အကုန်ပွင့်လို့ မွှေးရနံ့တွေလည်းထုံမွှန်နေပါတော့တယ်.......။
မနက်လင်းလို့ ကြေးမုံပေါ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ပုံရိပ်ကိုမမြင်ရပဲ သူမပုံရိပ်သာ ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်။ တဒင်္ဂလေးပေါ့.... ကျွန်တော်ဟာ သူမဖြစ်သလို သူမဟာလည်း ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။
ခုချိန်ကစလို့ သူမအတွက်ဆို အရာရာကိုဖန်ဆင်း စစ်တလင်းတောင် ချစ်ခြင်းနဲ့ပြည့်အောင် ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းနိုင်ရမယ်။
ဟိုရှေ့မှာ အနာဂတ် ဆိုတဲ့ခရီး ကိုရွက်လွှင့်ဖို့ သစ္စာတရားနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လှေငယ်တစ်စင်းရှိတယ်။
နားလည်မှု ဆိုတဲ့ တက်နဲ့ လှော်ခတ်လို့ ခရီးဆုံးထိ ရောက်အောင် တို့နှစ်ယောက် ရွက်လွှင့်ကြမယ် ။
လောကဓံ ဆိုတဲ့ ရေလှိုင်းတွေကြားမှာ ...........။
p-s: ကျွန်တော့်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအမှတ်တရ ပို့စ်လေးပါ။အခုမှတင်ဖြစ်တာကို တော့အားလုံးခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။
POSTED BY နွေမုန်တိုင်း 11 COMMENTS
လေ အဝှေ့မှာ ကြွေလွင့်ကြတာလေ...
စိတ်ဓါတ်တွေလည်း နွေနေပူမှာ ရေငတ် လို့...
ရင်ခွင်မှာ လမသာတာတောင် ကြာပေါ့..
POSTED BY နွေမုန်တိုင်း7COMMENTS
ကျွန်တော့် ဘ၀ထဲကို အမှတ်မထင်ရောက်လာသူ.......
ပန်းပိတောက်တွေ ပန်ဆင်ထားတဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေက လေအဝှေ့မှာ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
ပိတောက်ပန်းချစ်တဲ့ “မ” ရေ...
နွေဟာ "မ" ကြောင့်အေးမြသွားပြီ.
"မြင်မြင်ချင်းအချစ်"ဆိုတာကို လက်ခံလိုက်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့
ရွှဲရွှဲစိုနေတဲ့ မရဲ့အလှမှာ တဒင်္ဂ ကျွန်တော်နစ်မွန်းသွားတာတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ
အအေးဒဏ်ကို ကာကွယ်ဖို့ ကျွန်တော့် သန်ဘက်လေးထုတ် ပေးတော့
နှုတ်ဖျားက ထွက်ကျလာတဲ့စကားလုံးတွေက သင်္ကြန်ရေလို အေးမြလို့
နွေနေပူရဲ့နေ့လည်ခင်းကြီးမှာ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲက ဖြတ်ပြီး
"မ" တစ်ယောက်သာ မကြည့်လို့ မသိပေမယ့် အားလုံးက တွေ့နေကြပါတယ်
ကွယ်ရာမှာ ဟာသလုပ်ပြီး ပျက်လုံးမလုပ်ပစ်လိုက်ပါနဲ့"မ"ရယ်.
ကျွန်တော် ချစ်တာ ပိတောက်တွေလည်း သိပါတယ်...
သင်္ကြန်ရေနဲ့အတူ ရင်ထဲက ဝေဒနာတွေကို ကုစားပါ...။
POSTED BY နွေမုန်တိုင်း 13 COMMENTS
သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းနေတဲ့ မိုးရေတွေက ငါ့မျက်ဝန်းထဲက မျက်ရည်တွေကို သူနဲ့အတူရောထွေး စီးဆင်းစေတယ်။ ကောင်းပါတယ် မိုးရေ...... မိုးနဲ့ရောနေတဲ့ငါ့မျက်ရည်တွေကို ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ဟိုတစ်ချိန်တုန်းက ဒီလိုမိုးရေတွေကြားမှာ ထီးလေးတစ်ချောင်းကို တူတူဆောင်းပြီး မိုးမတိတ်မချင်း မိုးရွာထဲမှာ လျှောက်ခဲ့ဖူးတယ်။ “မိုးရွာတာကို ကျွန်မ သဘောကျတယ် ကို” တဲ့။ ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေ ခုချိန်ထိ နားထဲမှာ ကြားယောင်ဆဲ။
တစ်ခါ တစ်ခါကျတော့ မိုးရွာထဲမှာ ဆောင်းနေတဲ့ထီးကို လွှတ်ချပြီး သူမထွက်ပြေးတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးမိုးရေတွေစိုလို့ ။ “ပျော်စရာကောင်းတယ်နော်” တဲ့။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အေးတယ်ဆိုပြီး သူမညည်းပြန်တယ်။ ပြန်မယ်ဆိုတော့ “မိုးတိတ်မှ” တဲ့။ တော်တော်ပြောရခက်တဲ့ကောင်မလေး။ မိုးရွာထဲမှာ သ်ိပ်ကိုပျော်တဲ့ကောင်မလေး။ နှုတ်ခမ်းတွေပြာနေတာတောင် မိုးရွာထဲမှာ ပျော်လို့ကောင်းတုန်း ။ အအေးပတ်လိမ့်မယ်လို့ပြောလည်း သူမ ဂရုမစိုက်ပါဘူး။သူမက မိုးရွာရင်သိပ်ကိုသဘောကျတဲ့ ကောင်မလေးပါ။
မိုးရွာပြီဆိုတာနဲ့ သူမ ကျွန်တော့်ကို ခေါ်ပြီး မိုးရေထဲကို ထွက်တော့တာပါပဲ။ မလိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း တစ်ယောက်တည်းမသွားဘူး။ တစ်ချက်လောက်အော်ငေါက်ပြန်တော့ လည်း မျက်ရည်လေး တစ်ဝဲ၀ဲနဲ့။ နောက်ပြီးဆိုသေးတယ်။ “ကျွန်မက ကိုနဲ့ အတူတူ မိုးရွာထဲမှာ လျှောက်သွားချင်တာ” တဲ့။ မိုးခြိမ်းသံ ကြားရင်တော့ သူမကြောက်လွန်းလို့ ကျွန်တော့်လက် ဆုပ်ထားပြီးတော်တော်နဲ့ မလွှတ်တော့ပါဘူး ။မိုးခြိမ်းသံကိုတော့ သူမက ကြောက်တယ်တဲ့။
ပျော်ခဲ့ဖူးတဲ့အတိတ်က မိုးရေတွေက ခုချိန်မှာတော့ ငါ့ကိုမအေးမြစေနိုင်ပါဘူးချစ်သူ။
မိုးသည်းလေ ငါကြေကွဲလေ။ မိုးခြိမ်းသံကြားရင် ငါရင်တွေနာတယ်။ လျှပ်စီးလက်တဲ့ အခါ မင်းပုံရိပ်တွေကိုငါ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ ၀ိုးတစ်ဝါးမြင်ရတယ်။ မိုးသည်းထဲမှာ လျှောက်သွားနေတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲ လေးတွေကိုမြင်ရင် ငါနင့်ကို အရမ်းသတိရတယ်။ ခုတော့ငါ မိုးနဲ့အတူ နင့်ကိုလွမ်းနေတယ် ချစ်သူ။
ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်က ငါသာနင့်ကို အလိုမလိုက်ခဲ့ရင်.....
ခုချိန်မှာ ငါနင်နဲ့ အတူ မိုးရေထဲမှာ နှစ်ယောက်အတူတူရှိနေမယ်ဆိုတာ သေချာတယ်ချစ်သူ။ အရာအားလုံးပြီးခဲ့ပြီဆိုပေမယ့် မိုးရွာတိုင်းသတိရနေတဲ့ငါ ဘယ်လိုဖြေသိမ့်ရမှာလဲ။ နင်ပျော်ဖူးခဲ့တဲ့ မိုးရေတွေကပဲ နင့်ကို ခေါ်သွားကြတာလေ။ခုတော့နင်ပျော်နိုင်သေး ရဲ့လားချစ်သူ။ အားလုံးကို နင်ကထားခဲ့ပေမယ့် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ သူက မမေ့နိုင်ဖြစ်နေတာ နင်ကတော့သိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
မိုးရေတွေက ငါတို့နှစ်ယောက်ကို ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးခဲ့သလို ကြေကွဲစရာတွေကိုလည်း မိုးရေတွေကပဲ ပြန်ပေးခဲ့တယ်။ ခုတော့ဒါတွေ အားလုံး ပုံပြင်တစ်ပုဒ်လိုဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ နောင်တစ်နေ့ မိုးရေထဲမှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတဲ့ ချစ်သူတွေကို တွေ့ရင် နင်နဲ့ငါ့အကြောင်းကို ပြောလိုက်ပါ့မယ်ချစ်သူ။ ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကို နားထောင်ပြီး သူတို့တွေ ငါတို့နှစ်ယောက် လိုအဖြစ်မျိုးမကြုံရလေ အောင် ငါပြောလိုက်ပါ့မယ်။ အဲလိုပြောလိုက်လို့ သူတို့တွေရဲ့ နှုတ်ဖျားမှာ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ မိုးဇာတ်လမ်းလေးကို ပြောစမှတ်ဖြစ်နေကြ မယ်ဆိုရင်ပဲ ငါနင့်ကို လွမ်းရကျိုးနပ်ပါတယ်ချစ်သူ။
POSTED BY နွေမုန်တိုင်း 12 COMMENTS